Wasiirka Khayraadka Biyaha Somaliland Oo Ka Dhawaajiyay In Mashruucii Xumba-weyne Ay Curyaamiyeen Siyaasadayn Iyo Qabyaaladayni | Duul News International
Wasiirka Khayraadka Biyaha Somaliland Oo Ka Dhawaajiyay In Mashruucii Xumba-weyne Ay Curyaamiyeen Siyaasadayn Iyo Qabyaaladayni	(Duulnews)-Xuseen Axmed Cadulle, wasiirka wasaaradda Biyaha Somaliland, ayaa sheegay in Mashruuca Xumbo weyne oo qaybo badan oo Hargeysa ah lagu waraabin lahaa lagu furay Tushuush ku salaysan Qabyaalad iyo Siyaasad. Waxa uu sidoo kale faahfaahin dheeri ah ka bixiyay Qorshaha wasaaraddiisa.
Wasiirka oo Warbixin siinayay Guddida joogtada ah ee Golaha Wakiilada ayaa ugu horayn Qorshaha wasaaradda ka xog waramay “Waxaanu ku hawllannahay Sidii loo abuuri lahaa Jawi lagu soo jiito Maalgashadeyaasha Gudaha iyo dibadda si Biyaha wax looga qabto.waxa kale oo Wasaaraddu leedahay Istiraatijiyad ama Qorshe Qaran Oo Biyaha ah, kaas oo Wasiiradu ansixiyeen. Qorshehaasi oo ka duulaya hir galinta Mashaariicda oo ku salaysan qorshaha horumarinta wasaaradda Qorshaynta ee labada sanno,shanta Sanno iyo 30-ka sanno ee soo socda. Waxa kale oo aanu leenahay oo Baarlamaanku noo ansixiyay Xeerkii Biyaha oo aanu ku shaqayno. Waxa kale oo noogu qeexan Siyaasadda inaanu Maamul daadajin samayno ilaa heer tuulo ah” ayuu yidhi Wasiir Xuseen Axmed Cabdulle.
Wasiirku waxa uu sheegay in Guud ahaan dalka sanadkii la soo dhaafay ay ku sameeyeen daraasad ay fuliyeen laba sahan oo loo diray inay Ceelasha dalka ee Bari ilaa galbeed ah soo hubiyaan sida ay u shaqaynayaan iyo inta wax qabta “Lawyo-caddo ilaa Ceelaayo oo Xuduudka ah Ceelasha maanta dadku ka cabbaan way noo suntan yihiin.mid walba Banbada ku jirta iyo Matoorka ku jira waanu Ognahay. Waxaa Wasaaraddu awood u yeelatay haddii la yidhaahdo Saylac ayaa Ceelku ka fadhiistay inaanu Computer-kayaga galo markaaba Ogaano Bambada Ceelkaas ku jirta,Madoorka ku jira iyo Khasabadaha ku jira nooca ay yihiin” ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirku waxa uu ka waramay Mashaariic Hargeysa lagu biyo galinayay oo hortii la saxeexay balse aan ilaa hadda dhamaan kuwaasi oo uu tilmaamay in la siyaasadeeyay “Mashruucan Xumbo-weyne muddo ilaa 4 sanno ku siman ayuu Miiska inoo saarnaa.waxaan u imid iyadoo Ceelashii la qoday oo Mashruucii taagan yahay oo khadkuu mari lahaa la dhigay, taasi waxay keentay Isqabsi, Siyaasad, waxaana la dhexgaliyay Mashruucaas siyaasad iyadoo aan cidba Ogayn in Biyaha Ceelashu yihiin kuwo biyo leh.”
Wasiirku waxa uu sheegay in Mashruucan loogu talo galay in lagu waraabiyo Bariga ilaa Konfurta Hargeysa “Mashruucaas qayladiisu waa badatay,marbaa la yidhi inta Biyaha halkaas laga soo qaado ayaa galbeed la gaynayaa oo dib baa loo celinayaa, waxaasna waxba kama jirin. Mashruucaas waa la siyaasaddeeyay, waa la qabyaaladdeeyay Dilaalna waa dhex galay laakiin, waxaan maanta idiinku Bushaaraynaynaa inaanu Ogaanay inta ay leegyihiin Biyaha Ceelasha laga qaday Xumbo-weyne, Todobaadkii hore ayay daraasaddu noo soo dhamaatay, waxaanuna ka helay biyo badan.” Ayuu yidhi wasiirku.
Wasiirku waxa uu sheegay inuu haatan dhaw yahay dhamaystirka Qorshaha Mashruuca Xumbo-weyne.waxa uu sidoo kalena sheegay in Mashruuca Biyo Balaadhanti oo ay wado wakaaladda Biyaha Hargeysa oo kamadaxbannaanina wado ay hadda tahay arrin aan kharash la’aani hayn balse diyaar uu yahay.